Izinto eziyi-10 odinga ukuzazi ngePrimiracetam- iShangke Chemical
Izinto eziyi-10 odinga ukuzazi ngePrimiracetam
I-Pramiracetam powder itholakala emndenini we-racetam. Ukutholakala kwayo kanye nokubakhona kwayo kwenzeka emuva ngeminyaka yama-1970s, ngenxa yeParke-Davis Company. Yini etshela le nootropic kusuka kwamanye ama-racetam ukwakheka kwayo kwamangqamuzana kanye ne-potency ephezulu.
Eminyakeni edlule, ukusetshenziswa kwe-pramiracetam ubelokhu lonke ulaka ekwelapheni ukuwohloka komqondo, isifo i-Alzheimer's, nezinye izifo ze-neurological. Eminyakeni yama-80s ngasekupheleni kweminyaka engama-90s, bekukhona izivivinyo eziningana zeklinikhi eziphumelelayo, okufakazele ukusebenza kahle kwe-pramiracetam ekubuyiselweni kwememori ekulahlekelweni.
Ukuba semthethweni kwalesi sidakamizwa akuyona into exakile njengamanye ama-nootropics. Isibonelo, ungakwazi ngokufanele thenga i-pramiracetam powder futhi ulisebenzise ngaphandle kokuhlikihla amahlombe neziphathimandla. Noma ungeke ukwazi ukuthenga umkhiqizo eCanada, ungawungenisa ngokusemthethweni ukuze uwusebenzise. EYurophu, i-pramiracetam powder itholakala kuphela ngaphansi kadokotela osebenzayo wokuphatha i-dyslexia, dementia, Alzheimer's, ne-ADHD.
Kungani i-Pramiracetam idume kangaka?
Ukusetshenziswa kwePramiracetam idumile endaweni yama nootropics ngenxa ye-potency yayo. Kusebenza izikhathi ezingama-30 ngaphezulu kune-piracetam. Umuthi usebenza ngomlingo ngisho nangethamo elincane kakhulu. Itholakala kakhulu ngokuphila okude kwengxenye.
Iqiniso lokuthi ungezwa noma yimiphi imiphumela emibi lenza ukuthi isipiliyoni se-pramiracetam sibe nesidingo. Umuthi awumlutha nhlobo. Kuphephile futhi kubekezeleleke kahle emzimbeni womuntu. Kukhona izivivinyo zabantu eziphumelelayo ezifakazela ukusebenza kwale nootropic. Ngaphandle kwalokho, kugcina kahle ama-racetam amaningi nokunye i-nootropics powder.
Enye i-pramiracetam ukuthi ukutholwa kufana nokuthenga i-pair of sneaker. Ayikho imithetho eqinile edinga ukuthi unikezwe incwadi kadokotela, ikakhulukazi e-US.
Isebenza kanjani i-Pramiracetam?
I-Pramiracetam fat-soluble i-nootropic ingena egazini ngamafutha acid. Ine-bioavailability ephezulu futhi izofika ekuphakameni kwethonya cishe imizuzu engama-30.
Lesi sidakamizwa esihlakaniphile senza ukwanda kokuthathwa kwe-choline ku-hippocampus. Ngakho-ke, ilawula ngokungaqondile ukukhishwa kwe-acetylcholine (ACh), ebhekele imisebenzi ethile yobuchopho.
I-ACh ibhekele ukwakhiwa nokugcinwa kwememori yesikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, i-neurotransmitter iholela ekwandeni kokugeleza kwegazi kwamakhemikhali, into ethuthukisa ukuqonda.
Kuyini Ukusetshenziswa kwePramiracetam?
EYurophu, ukusetshenziswa kwePramiracetam kuvumelekile ekwelashweni kokuwohloka komqondo. Lesi sidakamizwa se-neuroprotective smart sisebenza kahle ekuthuthukiseni inkumbulo yesikhathi eside futhi sithuthukisa imisebenzi yokuqonda. E-US naseCanada, abafundi bathenga i-pramiracetam powder ukuze basebenzise i-off-ilebula njengesidakamizwa sokutadisha lapho befaka izivivinyo ezinkulu.
Kusukela yakhula ngo-1979, i-Pramiracetam ibiyisidakamizwa esikhonjelwe ezigulini ezinezifo ezine-neurodegenerative kanye ne-traumas yobuchopho. Imakethe yayo ebekiwe yayihlose abantu asebekhulile kodwa abantu abaphilile bajoyine isipiliyoni se-pramiracetam, ikakhulukazi ukukhulisa umkhiqizo wabo ezifundweni zabo nasemabhizinisini.
Imiphumela Nemihlomulo ye-Pramiracetam
I-Pramiracetam inyusa inkumbulo yenkomba. Ososayensi abagcinanga ngokuhlola la ma-nootropics kumamodeli we-murine kepha nezifundo zabantu.
Umuthi usebenza ngokuvuselela i-hippocampus ukudala izinkumbulo ezintsha, ukugcina ezindala, nokunciphisa ukukhohlwa. Iningi labafundi lithatha injabulo ku isipiliyoni se-pramiracetam ukukhulisa inkumbulo yabo lapho befundela izivivinyo.
Ukuphathwa kwezifo eziqondayo
Kube nokuhlolwa okuningana kwemitholampilo okufakazela ukusebenza kahle kwePramiracetam powder ekunqandeni izifo eziwohlokayo.
Izinzuzo zePrimiracetam iziguli ezinokuwohloka komqondo ngokubuyisela emuva i-amnesia kanye nokwenza ngcono ukukhumbula kabusha. E-Europe, ngokwesibonelo, umuthi ohlakaniphile ungumtamo osemthethweni wokulawula isifo se-Alzheimer's.
Ukuthatha amaphilisi we-pramiracetam azovikela ama-neurons akho. I-nootropic ibuyisa ukuphazamiseka kwengqondo ezigulini ezihlupheke ngenxa yokuhlukumezeka kobuchopho bemvelaphi ye-cerebrovascular. Ngaphezu kwalokho, kunciphisa ukwehla kwengqondo okungenzeka ngenxa yokuvezwa kwezidakamizwa ze-amnesic njenge-scopolamine.
Ikhono Lokufunda Ephakeme
Ucwaningo oluningi luqinisekisa ukuthi ukuthatha izidakamizwa ze-pramiracetam nootropic kuzothuthukisa ukufunda kwendawo. Kuyinto isengezo sokuqonda lokho kuzokusiza ukuba ubambe izinto kalula.
I-nootropic igoqa umsebenzi we-nitric oxide synthase ku-hippocampus. Le neurotransmitter idambisa ukuphazamiseka kwengqondo futhi idlala indima enkulu ekufundeni nasenkumbulweni. Isebenza ngokwandisa ukulethwa kwegazi ebuchosheni, ngakhoke, lilungisa imisebenzi ye-neuronal.
I-Pramiracetam isiza isistimu yezinzwa ephakathi ngokwandisa ukukhiqizwa kwe-acetylcholine, nayo enesandla ekufundeni. Ngaphandle kwalokho, uzoba nokuqapha, ukuqaphela, nokuphaphama.
I-Pramiracetam Powder Dosage Enconyiwe Uma Isetshenziswa Yedwa
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke we-pramiracetam uphakathi kuka-400mg no-600mg. Ezifundweni zemitholampilo ezikhona, izifundo zingathatha kuze kube ngu-1200mg we izidakamizwa ezihlakaniphile, okungcono ngemuva kokudla.
Njengoba i-pramiracetam powder inenxenye yesikhathi sempilo, ungahlukanisa umthamo kabili. Lesi silinganiso siyinzuzo impela eqenjini le-pharmacophobic. Imithamo emithathu ngosuku ingaba inketho enkulu kepha kufanele uqiniseke ukuthi uhlela umuthi wakho kadokotela amahora ambalwa ngaphambi kokulala. Awufuni ukuphambanisa nesigqi sakho se-circadian.
Ungathenga i-Pramiracetam ngendlela ye-capsule noma yepilisi. I-powder is-soluble, ngakho-ke, ngeke kube ngumqondo omuhle ukuyifaka ephuzweni lakho. Ngenye indlela, ungayincibilikisa emafutheni kakhukhunathi noma kwamanye ama-lipid. Uma ukhathazwa ukunambitheka okungafanele, kufanele ukhethe amaphilisi we-pramiracetam.
Njenge-newbie, qiniseka ukuqala kusuka kumthamo ophansi kakhulu njengoba ubheka umzimba wakho ukubekezelela nemiphumela. Ngemuva kwalokho, ungaguqula umthamo ngokuthanda kwakho futhi ungeze okunye pramiracetam izitaki.
Imiphumela Pride Pramiracetam Okufanele Uyazi
Ngokungafani namanye ama-racetams, imiphumela emibi ye-Pramiracetam ayimfihlo. Umzimba wakho ungabekezelela isengezo kungakhathalekile ukuthi umthamo ungakanani.
Ungahle ube nezimpawu zesikhashana ezinjenge-pramiracetam ikhanda, isiyezi, ukuqwasha, ukucindezeleka kwesisu, noma ukuguguleka. Kodwa-ke, ungagwema imiphumela emibi ngokunciphisa umthamo we-pramiracetam. Uma unekhanda elijwayelekile, kungadingeka ukuthi ugcwale nge-choline.
I-Pramiracetam VS Piracetam
I-Piracetam inganduleli wazo zonke ezinye i-nootropics emndenini we-racetam ngokuqala kwayo ukuqala emuva ngawo-1970. Ngakolunye uhlangothi, i-pramiracetam itholakala kumuthi ohlakaniphile.
Lezi zinhlanga ezimbili zinemiphumela efanayo. Kodwa-ke, ziyehluka ngesakhiwo sazo samangqamuzana namandla awo. Isibonelo, pramiracetam Isidakamizwa esihlakaniphile sisebenza izikhathi ezingama-30 futhi sisebenza kahle kunesanduleli saso. Ngaphezu kwalokho, i-nootropic ine-bioavailability ephakeme.
Iseluleko Se-Pramiracetam Stack
I-Pramiracetam inika amandla eminye imiphumela ye-nootropics. Yisidakamizwa esinamandla ngokwe-se kodwa ungasifaka nangeminye imicibisholo kanye nezengezo ze-cholinergic.
Uma umusha kusizinda se-nootropics, akufanele uphuthume ukuzama noma yikuphi isitaki se-pramiracetam. Ngemuva kwakho konke, lesi sidakamizwa esihlakaniphile sisebenza ngokuphumelelayo njengento yokuma yodwa. Lapho uhlelo lwakho lungakwazi ukubekezelela imiphumela ye-pramiracetam, uzokhululeka ukuyihlanganisa namanye ama-nootropics.
Izithasiselo ze-Cholinergic zilungile kulokhu kufakwa njengoba zilungisa amakhanda we-pramiracetam.
I-Pramiracetam ne-Oxiracetam Stack
Akungabazeki ukuthi lesi sitaki sizophinda kabili amandla akho okugxila, uhlale uqaphile, futhi ukhanyele emuva kokwedlule kwakho.
Ngeyunithi ngayinye ye oxiracetam, kuzofanele uthathe amayunithi amane amaphilisi we-pramiracetam. Thatha, ngokwesibonelo, uma isitaki sakho sifaka umthamo we-800mg we-pramiracetam umthamo, kufanele ufake ama-200mg we-oxiracetam.
I-Dose yansuku zonke
I-Pramiracetam ne-Aniracetam Stack
Ngaphandle kokukhuthaza ukusebenza kobuchopho, la ma-racetam amabili azosusa ukukhathazeka, ukunganaki, kanye nokudangala.
I-Aniracetam inokuphila okufushane okuyingqayizivele kuqhathaniswa nomlingani wayo. Ngakho-ke, kuzokushaya ngesikhathi futhi uqale ukusebenza ngaphambi kokuthi uzuze izinzuzo ze-pramiracetam. Ukufaka lezi ezimbili kuzokuvimbela futhi ekuthuthukiseni ukubekezelelana kune-nootropic eyodwa.
Ngethamo ngalinye le-pramiracetam, uzodinga cishe ama-600mg we-aniracetam.
I-Pramiracetam ne-Alpha GPC stack
Lesi sitaki se-pramiracetam ungumthombo wokugcina we-acetylcholine. Ayigcini nje ngokuqinisa ukusebenza kwengqondo kepha futhi ithuthukisa inkumbulo. Ukuhlanganiswa kwe-Alph GPC ukuthi kutholakala kakhulu njengoba iwela kahle isithiyo segazi-ingqondo.
Ukungezelelwa ngamakhambi we-GPC choline eminye yemiphumela emibi ye-Pramiracetam efana nobuhlungu bekhanda. Ngaphandle kwalokho, ivuselela ama-neurons, ilungisa ama-membrane amaseli agugile, futhi ihlanganise i-acetylcholine, okuyi-neurotransmitter ebalulekile ebhekele imemori.
Ngomthamo wakho wansuku zonke, uzodinga ama-400mg we I-Alpha GPC ukwengeza.
I-400mg Alpha GPC isengezo
Iphakethe le-Pramiracetam coluracetam
I-Coluracetam ivuselela ingqondo yakho, ithuthukisa ukuzindla, futhi ibuyise inkumbulo yesikhathi eside. Kuthuthukisa ukuthathwa kwe-choline kumaseli we-neuronal. Ngaphezu kwalokho, isengezo silungele ukubonwa ngamehlo njengoba silungisa izinzwa zamehlo nomonakalo we-retinal.
Kwisitaki sakho se-pramiracetam, i-30mg ye coluracetam sekwanele.
Ungayithenga kanjani futhi kuphi i-pramiracetam powder?
Ungathenga i-nootropics pramiracetam ku-powder, capsule, noma ifomu lepilisi. Isidakamizwa esi-smart asithole ukwamukelwa okusemthethweni yi-FDA kodwa usengayigxoba izitolo ezitolo. Kunemakethe emnyama eminingana futhi, ngakho-ke, udinga ukuthi uqiniseke ukuthi umthengisela i-intanethi onedumela elihle.
Ungasibambela i-oda lakho ngoba sinerekhodi eliqinisekisiwe lokuthengisa ama-nootropics asemthethweni. Senza ukuhlolwa okuzimele kwelebhu konke imikhiqizo yethu ngaphambi kokuzithengisa kumakhasimende ethu ahlonishwayo.
Uma kwenzeka uzibuza ukuthi kungani amaphilisi we-pramiracetam abiza kunamanye ama-racetam, ngizokunikeza isizathu. Ukuvumelanisa le nto kuseduze nepuzzle yamaGrikhi. Inqubo iyinkimbinkimbi ukwedlula njengoba injalo ngesikhathi sokuhlanganiswa kwama-nootropics amaningi.
I-Nootropics pramiracetam isidakamizwa esinamandla esinamandla sokwandisa amandla akho okufunda. Kuyisinqumo esihle kwababili asebekhulile kanye nabantu abaphilile abafuna ukugxila, ukuhlala beqaphile, futhi nokuqina kwengqondo emisebenzini yabo yansuku zonke. Isengezo sisiza iziguli ezinezimo ze-neurodegenerative ukubuyisa inkumbulo yazo elahlekile futhi zigcine imininingwane.
Wonke ama-nootropics abhekane nokulingwa kokuqala kodwa i-pramiracetam iphakathi kokumbalwa okuye kwazanywa kwizifundo zabantu. Ezifundweni ezahlukahlukene zokucwaninga, kusobala impela ukuthi umuthi uphephile ukuwusebenzisa futhi ubekezeleleka kahle emzimbeni.
McLean, A., Cardenas, DD, Burgess, D., Gamzu, E. (1991). Isifundo esilawulwa yi-placebo esilawulwa yi-pramiracetam emadodeni amancane anenkumbulo nezinkinga zokuqonda okubangelwa ukulimala kwekhanda ne-anoxia. Ukulimala Kwengqondo.
I-Corasaniti, MT, et al. (1995). Ukuphathwa kwe-systemic kwe-pramiracetam kwandisa umsebenzi we-nitric oxide synthase ku-cortex ye-cerebral ye-rat. I-Neurology eSebenzayo.
I-Tkachev, AV (2007). Ukusetshenziswa kwama-nootropic agents ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kweziguli ezinomqondo wobuchopho. Likars'ka sprava.
I-Pugsley, TA, et al. (1983). Ezinye izakhiwo ze-neurochemical ze-pramiracetam (CI-879), i-ejenti entsha ekhulisa ukuqonda. Ukucwaninga Ukuthuthukiswa Kwezidakamizwa / umqulu 3, Ukukhishwa 5.
I-Auteri, A., Blardi, P., Celasco, G., Segre, G., Urso, R. (1992). I-Pharmacokinetics ye-pramiracetam kumavolontiya anempilo ngemuva kokuphathwa ngomlomo. I-International Journal of Clinical Pharmacology Research.
UClaus, JJ, et al. (1991). Izidakamizwa zeNootropic zesifo se-Alzheimer's: ukwelashwa okubonakalayo nge-pramiracetam.
UChang, T., Omncane, uMR, uGoulet, uRJ, noYakatan, JG (1985). I-Pharmacokinetics ye-pramiracetam yomlomo kumavolontiya ajwayelekile. I-Journal of Clinical Pharmacology.
2.Kungani i-Pramiracetam idume kangaka?
3.Isebenza kanjani i-Pramiracetam?
4.Kuyini Ukusetshenziswa kwePramiracetam?
5.Imiphumela nezinzuzo zePramiracetam
I-6.Incomo yePrimiracetam Powder Enconyiwe Lapho Isetshenziswa Yedwa
7.Pramiracetam Imiphumela Emibi Okufanele Uyazi
I-8.Pramiracetam VS Piracetam
Iseluleko se-9.Pramiracetam Stack
10.Kanjani futhi kuphi ukuthenga pramiracetam powder?